Kutsvaga Kwemunharaunda kuri Kukura, Uri Iwe Pamepu Here? | Martech Zone
Kutsvaga Kwemunharaunda kuri Kukura, Uri Iwe Pamepu Here?
Wednesday, April 1, 2009 Chipiri, June 23, 2015 Douglas Karr
Kuedza kupinda mune yekutsvaga peji peji reiyo chaiyo kiyi izwi izwi kunogona kutora basa rakawanda. Ndiri kushamiswa nenhamba yemabhizinesi emuno, zvakadaro, izvo zvisingatore mukana Google Local Business. Ndakashanda newangu wandinoda Indianapolis Kofi Shop, Mukombe weBean, kuti uwane nzvimbo yakanaka yekutsvaga ... asi danho rekutanga yaive yekuona kuti vakanyorwa pamapu eGoogle:
Kana iwe ukaita a tsvaga paGoogle nokuti kofi shopu Indianapolis, chero mitsva yekutsvaga isati yauya mepu inowoneka nezvose zvitoro zvekofi zvemuIndianapolis.
Kuenda pamepu iyi haisi nyaya yekuzivikanwa, ingori nyaya yekunyoresa kuGoogle Local Bhizinesi. Kunyoresa uye kuzivisa nzvimbo yako paGoogle Yemunharaunda Bhizinesi kunoisa iwe pane yakakurumbira Google Search injini mhedzisiro panoratidzwa mepu - pamwe nekukuisa iwe pa mepu neGoogle Mepu yekutsvaga.
Pane toni yesarudzo inowanika zvakare - kuisa mapikicha, makuponi, nhamba dzenhare, maawa ekushanda, nezvimwe. Maitiro ekusimbisa ari nyore ... Google inoridza nhare kune bhizinesi nhamba rawakapa kuti uve nechokwadi chekuti uri chaiyo. Kana iwe uine otomatiki foni sisitimu, unogona kusarudza-mukati kuti Google ikutumire iwe yekusimbisa kadhi. Ukangogamuchira kadhi, ingo pinda muaccount yako uye nyora kodhi yekuongorora.
Wakamirira chii? Isa bhizinesi rako pamepu nhasi! Ndakataura here kuti ndeye mahara?
Tags: mepu dzeGoogle mabhizimusigoogle bhizinesi renzvimbogoogle MapsGoogle+ Yemunharaunda
Tsvaga Injini Kugonesa: Nyore kana Zvakaoma?
Zvemagariro Midhiya uye Mushandi Conundrum
Mar 25, 2010 pa 11: 20 AM
Izvi zvakakosha kune ese marudzi ebhizinesi emuno. Inopa zvaunotungamira uye vangangove vatengi iko kunzwa kuti uripo wakamirira kuti vaende. Kuisa bhizinesi rako kumusoro kwekutsvaga mhinduro uye kweanopfuura mumwe mhedzisiro kunogadzira kukanganisa kukuru kune vatengi vako. Ivo havazombofungidzira kudzvanya pane yako link!
Tarisa mamwe mazano uye ubatanidze hurukuro pa Startups.com!